MindMapping iyo wadashaqeynta shirkadda | Martech Zone
MindMapping iyo Wadashaqeynta Shirkada
Tuesday, May 22, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Macaamiilkeenna, Mindjet, wuxuu soo saaray deeq cusub oo si gaar ah loogu talagalay shirkadaha. Intaa waxaa sii dheer, waxay soo rogeen cusbooneysiin ku saabsan Isku xidhkooda maareynta shaqada iskaashi wax soo saar - keenaya isku xirnaan buuxda Web, desktop iyo aaladaha mobilada wakhti kasta, meel kasta oo lala kaashanayo (iyo a website cusub si loo waafajiyo xalalka cusub).
Mindjet Connect V4 waxay sii wadaa isbeddelka sheyga si ay u siiso hal khibrad oo adeegsade ah oo isku xirta fikradaha iyo qorshooyinka iyadoo la fulinayo qorshayaashaas.
Isticmaalayaasha Mindjet Connect hadda hel
Socodka heerka ugu sareeya ee udhaxeeya Aragtida iyo Waxqabadka Isku xidhka, abuurista hal, khibrad websaydh ah oo bilaa turxaan ah oo ku biiraya iskaashiga abuurista fikradaha, istaraatiijiyadaha iyo qorshooyinka, iyada oo awood u leh in lagu meeleeyo lana socdo dadaallada iyada oo loo marayo fulinta iyo dhammaystirka.
Hal calaamad oo fudud oo ku saabsan Google iyo Facebook si dhakhso ah oo fudud u helitaanka sheyga
Isku xirnaanta sheyga si fiidiyowyo is-dhexgal ah
Kordhinta la heli karo ee keydka ah oo loo kordhiyay 2GB aasaasiga / 5 GB ee Ganacsiga
Goor dhow! Isdhexgalka Mindjet Isku xirnaanta Android
Iyadoo qayb ka ah isbeddelka Mindjet shirkaddu waxay ku dhawaaqeysaa deeqo cusub oo si gaar ah loogu talagalay shirkadaha, kooxaha iyo shakhsiyaadka si sax ah uga tarjumaya sida ganacsiyada ay ugu adeegsadaan Mindjet iskaashiga. Waxyaabahan cusub ee la bixiyay waxay diirada saareen sidii ay si wanaagsan ula kulmi lahaayeen baahida macaamiisha. Dhammaan bixinta waxaa ka mid ah MindManager, Barnaamijka Mindjet ee desktop-ka halyeeyga ah, iyo barnaamijyada moobilada ee Mindjet.
Mindjet waxaa loogu talagalay ururada u baahan la shaqee kooxo badan oo gudaha ah iyo la-hawlgalayaal dibadeed, oo bixisa wada shaqeyn daruur ku saleysan iyo mid hordhac ah iyo adeegyo xirfadeed iyo taageero.
Shaqaaluhu hadda si dhakhso leh ayey uga guuri karaan fikradda qorshaynta ka dibna si dhakhso leh loogu fuliyo qorshayaashaas iyo hawlahaas ama daruuraha dadweynaha (iyada oo loo marayo Connect) ama jawi aamin ah SharePoint (ilaa Isku xidhka SP).
Mindjet sidoo kale waxaa ku jira tusaalooyinka xalka iyo la-tashiga tababarro dheeri ah, adeegyo xirfadeed, iyo mudnaanta adeegga macaamiisha iyo taageerada.
Mindjet ee Kooxaha waxaa loogu talagalay waaxyada iyo kooxaha doonaya inay si dhakhso leh uga gudbaan fikradda una wareegaan fulinta. Shaqaaluhu waxay helayaan Mindjet awood badan oo MindManager ah oo leh qaab dhismeed adag oo maskaxeed iyo qorshayn ah, Mindjet Connect's Vision iyo Action modules, iyo barnaamijyada moobiilka ee caanka ah ee Mindjet si ay ula shaqeyn karaan una wadaagi karaan shaqada iyadoon loo eegin goob kasta, madal ama aalad.
Mindjet ee Shakhsiyaadka waa sheyga ugu fiican ee shaqaalaha macluumaadka u baahan in la abuuro fikrado, maareeyo macluumaadka lana wadaago dadka kale shaqada. Xirfadlayaashu waxay helayaan Mindjet awood badan oo MindManager ah oo leh qaab dhismeed adag oo maskaxeed iyo qorshayn, oo ay weheliso Mindjet Connect iyo Mobile si ay ula wadaagaan shaqada iyadoon loo eegin goob kasta, madal ama qalab.
Saxiix Mindjet hadda account koontada aasaasiga ahi waa bilaash!
Tags: iskaashixirmaanganacsiMindjetfekerkadhufto eeMaamulka mashruucasharepointkooxdaqalab
Warbaahinta Bulshada - Guul aan la qiyaasi karin?